Ra’iisal wasaraha Soomaliya oo Baydhabo kula shiraya Odayasha iyo waxgaradka Gobolka Bay, – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaRa’iisal wasaraha Soomaliya oo Baydhabo kula shiraya Odayasha iyo waxgaradka Gobolka Bay,
Ra’iisal wasaaraha Xukumadda Soomaliya Cumar Cabdirashiid Cali sharmarke oo maalintii shalay gaaray Magalaada Baydhabo ee Xaruunta Gobolka Bay ayaa maanta lagu wadaa inuu magaaladaasi kula Kulmo Bulshada qeybaheeda kala duwan oo ay ugu horeeyaan Odayaasha iyo Waxgaradka.
Cumar Cabdirashiid Cali sharmark Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya oo shalay gaaray magaalada Baydhabo ayaa halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka K/galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan,waxayna ka wada hadleen hanaanka ay u socoto soo xulista xubnaha Baarlamaanka maamulka Koonfur galbeed iyo sidii loo soo dedejin lahaa.
Ra’iisal wasaraha Xukumadda Soomaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmarke, ayaa ku sheegay ujeedka socdaalkiisa Baydhabo iney tahay sidii ay u dhageysan lahaayeen cabashooyinka ka soo yeeraya Shacabka K/galbeed iyo waliba in sidii arimahaasi xal looga gaari lahaa.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh ayaa ku mashquulsan qaabkii uu ku soo xuli lahaa xubnaha Baarlamaanka maamulka iyo dhameystirka howlaha maamulkaasi.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in muran uu ka jiro habka ay u socoto xulista maamulka oo qaar ka mid ah beelaha ay saluugsan yihiin siday wax u socdaan.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u soo dhameystirmi lahaayeen maamulada harsan ee wali la dhisin iyo kuwa dhisan oo aan dhameystirneyn.